बालश्रम हामी कहाँ हुदैन ; व्यवसायी आशिष थापा – Ramro Sandesh बालश्रम हामी कहाँ हुदैन ; व्यवसायी आशिष थापा – Ramro Sandesh
बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोक विश्वमा कोरोना भाइरसले नराम्रो असर गर्यो, कोरोनाको समयमा प्राय सबै व्यापार व्यावसाय बन्द थिए । अहिले नेपाल सरकारले कोरोनाको खोप ल्याएपछि नेपालीहरुमा केही खुशी छाएको छ । दुई महिना अगाडी देखी व्यावसाय खुले पनि व्यापार भने खासै नभएको व्यापारीहरु बताउदै आएका छन् । झण्डै दुई सय जनालाई रोजगारी दिएको जिन गाङ्ग शान ईट्टा उद्योग प्रा. लि चाईनिज ईट्टा उद्योग आज भोली निरन्तर संचालन भैरहेको छ ।
जिन गाङ्ग शान ईट्टा उद्योग प्रा. लि चाईनिज ईट्टा उद्योग बनेपा दश जनागालका संचालक आशिष थापा भन्नुहुन्छ हामी कोरोनाको समयमा निकै मार खेप्नु पर्यो काम गर्ने कामदार देखी लिएर बिभिन्न समस्यामा थियौ, अहिले उद्योग संचालनमा आए देखी केहि राहात महसुश गरेका छौ । अहिले हाम्रोमा काम गर्ने कामदार खुशी छन् भने कसैले केही पनि गुनासो गरेका छैन्न । अत्याधुनिक चाईनिज प्रबिधिबाट बनेको सस्तो राम्रो र बलियो ईट्टा बनाउने गरेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छु ।
कोरोनाको समयमा उद्योग संचालकले ईट्टा भट्टा संचालन गर्न पाएन्न भने उता कामदारले काम नपाउदाँ जिविका चलाउन नै गार्यो परेको जिन गाङ्ग शान ईट्टा उद्योगका कामदार कर्ण बहादुरले बताए । उनले भने अहिले उद्योग संचालनमा आए पछि हामी निकै खुशी भएका छौ पैसा नभएर धेरै गार्यो भएको थियो । काभ्रेमा ईट्टा भट्टाको समग्र अवस्था, यसमा बालबालिकाको प्रयोग, नेपाल सरकारको मापदण्ड, ईट्टाको गुणस्तरीयता लगायतका बिषयमा जिन गाङ्ग शान ईट्टा उद्योग प्रा. लि चाईनिज ईट्टा उद्योगका संचालक आशिष थापासँग नव क्षितिज साप्ताहिको लागी अरबिन्द्र गौतमले गरेको छोटो कुराकानी
० आजभोली के गदै हुनुहुन्छ ?
म आजभोली यता ईट्टा भट्टा तिर नै व्यस्त छु । ईट्टा बनाउने बेच्ने यस्तै हो । कोरोनाको कारण लामो समय बन्द गर्नु पर्यो अहिले संचालनमा आएको छ । केही राहात महसुश गरेका छौ । दुई तिन सयले रोजगारी पाएका छन् उद्योग संचालन भएकोले उनीहरु पनि निकै खुशी छन् ।
० ईट्टा उद्योग संचालन गर्ने सोच बिचार कता बाट आयो ?
सरुमा सबै भन्दा पहिला त म सानो तिनो जब गर्न गरेको थिए । त्यो छोडेर कृषि पेशा तिर लागे दुई रोपनि खेतमा काउली लगाउदै थिए । त्यति नै बेला चाईनिजहरु घुम्दै म भएको ठाँउमा आए, यो तपाईको खेत हो भनेर सोध्न थाले मैले पनि हो भने, हामी चाइना बाट आएको हौँ यहाँ एउटा ईट्टा उद्योग राख्नु पर्यो हुन्छ कि हुदैन भनेर सोध्नु भयो । मैले पनि यहाँको बारेमा सबै जानकारी दिए । यहाँ माटो छैन्, राख्नु हुदैन्न भनेर भन्लान सबैले सबै कुरा सोधेर खबर गर्न जानकारी गराए । त्यस पछि गाउँका सबै दाजु भाई काका बुबा आमाहरुको सल्लाह लिए र चाईनिजहरु आए कुरा गर्न त्यस पछि सबैले हन्छु नि भन्नु भयो अनि यसरी संचालन भयो ।
० कस्ता कस्ता प्रबिधिको प्रयोग गरेर ईट्टा बनाइन्छ ?
सरुमा त मैले अगिना नै भनिसके हामी कहाँ माटो छनै यस ईट्टा बनाउनको लागी तिन चार प्रकारको माटो चाहिन्छ । कालो रातो चिम्टे माटो, अरु बिभिन्न माटोहरु मिलाएर बनाउने हो यो सबै किनेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ । अनि अर्को कुरा अत्याधुनिक चाईनिज प्रबिधिबाट बनेको सस्तो राम्रो र बलियो ईट्टा बनाउने गरेका छौ । सबै मेसिनहरु चाईना बाट नै लिएर आएका हौ । चाईनिज मेसिनले नै ईट्टा बनाउने हो । हामीले धेरै नै प्रबिधिको प्रयोग गरेका छौ ।
० चाईनिज प्रबिधि बाट ईट्टा बनाउनु हुन्छ ?
हो हामी चाईना बाट नै लिएर आएका मेसिनहरु प्रयोग गरेर नै ईट्टा बनाउने गरेका छौ, हामीले बनाएको ईट्टा कतिको बलियो र भरपर्दा हुन्छ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ । अरु लोकल साचो ले बनाएको ईट्टा भन्दा कयौ गुना राम्रो हुन्छ ।
० काभ्रेमा ईट्टाको बजार कस्तो छ ?
बजार राम्रो हुनको लागी हामी पुरानो कम्पनी होइन् । आफ्नो नाम चलि सकेपछि आफै चल्ने हो । भर्खरै आएको भएकाले पनि साचे जस्तो छैन् । जति पनि यहाँ बाट ईट्टा लाने ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरु सबै खुशी भएर फेरी पनि आउने चिन जानेका मानिसहरु लाई पठाइदिने गर्नु हुन्छ । सबै जना सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।
० ईट्टा उद्योग संचालन गर्दा के कस्ता समस्याहरु आउछन् ?
खासै केही समस्या छैन् । जहाँ पनि स्थानिय स्तर बाट नै समस्या आउने हो । गाउँ ठाउको सबै मानिसहरुले सल्लाह सुझाब दिनु हुन्छ यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर उहाँहरुको सुझाब अनुसार अगाडी बढिरहेको छौ । बनेपा नगरपालिका वडा दश जनागालका सबै मानिसहरु बुझने नै छन् दश नम्वर वडा आफैमा राम्रो वडा हो । हामीले देशको नियम कानुनमा रहेर काम गरेका छौ । कसैलाई यस्तो गर्न पाए हुन्थो उस्तो गर्न पाए हुन्थो भनेर सोच्ने कोही पनि हुनुहुन्न् । त्यस्तो केही समस्या छैन् ।
० ईट्टा उद्योगमा धेरै बालबालिकाको प्रयोग भयो भनेर धेरै न्युज पनि आउने गरेको छ तपाईकोमा त्यस्तो छ कि छैन् ?
हामी बालश्रम प्रयोग गदैनौ बालश्रमको बिरोध गदै आएका पनि छौ । अठार वर्ष भन्दा कम उमेर भएका लाई हामी यहाँ काम लगाउदैनौ । हामीले अहिले सम्म लगाएको पनि छैन् । म बालश्रम बिरोधि पनि हुँ आफैमा केही नभएकाहरु लाई त सहयोग गरेका छौ,धर्म पनि हो, यो भनेको पैसा नै कमाउनु पर्छ भन्ने नियतिले हामी कहीले पनि त्यस्तो गर्ने पनि छैनौ । बालश्रम हामी कहाँ हुदैन ।
० यहाँ काम गर्न कामदारको अवस्था कस्तो छ ?
यस उद्योगमा झण्डै दुई तिन सय कामदार छन् । उनीहरु रोजगार पाएर खूशी नै छन् । कसैको केही गुनासो आएको छैन् । अरु उद्योगमा काम गर्ने कामदार लाई भन्दा हाम्रोमा काम गर्ने कामदारहरु लाई सुबिधा धेरै छ । उनीहरु खुशी छन् सबैको राम्रो नै छ । कोही हिमाल तिरका छन् भने कोही पहाड, तराईकाहरु पनि छन् । सबै ठाउँ बाट काम गर्न आएका छन् ।
हाम्रो कम्पनिमा आउनुहोस् ईट्टा कसरी कुन प्रबिधिले बनाउने गरेको छ र्हनुहोस् हामी कहाँ चाइनिज प्रबिधिबाट बनेको बलियो राम्रो सस्तो ईट्टा पाइन्छ चाहियमा सम्र्पक गर्न सक्नुहुनेछ । यस ईट्टा उद्योगको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।